SME ချေးငွေလျှောက်ထားခြင်းအတွက် အတိုးနှုန်း ၀ ဒသမ ၅ ရာခိုင်နှုန်းထပ်မံလျှော့ချမည် | Myanmar Business Today
HomeBusinessSME ချေးငွေလျှောက်ထားခြင်းအတွက် အတိုးနှုန်း ၀ ဒသမ ၅ ရာခိုင်နှုန်းထပ်မံလျှော့ချမည်
SME ချေးငွေလျှောက်ထားခြင်းအတွက် အတိုးနှုန်း ၀ ဒသမ ၅ ရာခိုင်နှုန်းထပ်မံလျှော့ချမည်
Covid-19 ၏ အကျိုးသက်ရောက်မှုကို ခံရမှုအများဆုံးဖြစ်သောလုပ်ငန်းများမှ အာမခံပစ္စည်းထား၍ ချေးငွေသစ်လျှောက်ထားပါက ယခင်သတ်မှတ်ထားသည့် အတိုးနှုန်းထက် ၀ ဒသမ ၅ ရာခိုင်နှုန်းထပ်မံလျှော့ပေးသွားမည်ဖြစ်ကြောင်း မြန်မာနိုင်ငံသားများဘဏ်မှ သိရသည်။
ယင်းသို့ လျှော့ထားသောအတိုးနှုန်းဖြင့် ချေးငွေအသစ်လျှောက်ထားမှုကို မေလ ၃၁ ရက်အထိ လျှောက်ထားနိုင်ကြောင်း မြန်မာနိုင်ငံသားများဘဏ်မှ သိရသည်။
စိုက်ပျိုးရေး၊ကျန်းမာရေး စောင့်ရှောက်မှု၊ ဆေးဝါးထုတ်လုပ်ဖြန့်ချိရေး၊ သတင်းအချက်အလက်နည်းပညာ လုပ်ငန်းများ၊ အသေးစားနှင့်အလတ်စားစီးပွားရေးလုပ်ငန်းများ(SME)မှာ ထိခိုက်မှုရှိနေပြီး JICA ချေးငွေများအတွက် မြန်မာနိုင်ငံသားများဘဏ်မှတဆင့် အတိုးနှုန်း ၇ ရာခိုင်နှုန်း၊ အာမခံဖြင့် ထုတ်ချေးသည့်ချေးငွေများအတွက် အတိုးနှုန်း ၁၁ ဒသမ ၅ ရာခိုင်နှုန်းအထိ သတ်မှတ်ထားခြင်း ဖြစ်သည်။
ထို့ပြင် ချေးငွေပြန်လည်ပေးဆပ်မှုများအတွက်လည်း အတိုးပြန်ဆပ်ခြင်းများဆိုင်းငံခြင်းနှင့် နောက်ကျကြေးများအား သက်သာခွင့်ပေးမည်ဖြစ်ကြောင်း မြန်မာနိုင်ငံသားများဘဏ်မှ သိရသည်။
မြန်မာနိုင်ငံရှိ အစိုးရနှင့် ပုဂ္ဂလိကဆေးရုံများတွင် အချိန်ပြည့်တာဝန်ထမ်းဆောင်နေသည့် ဆရာဝန်၊သူနာပြုများနှင့် အခြားကျန်းမာရေးဝန်ထမ်းများသည့် ကာလသတ်မှတ်ချက်ဖြင့် အပ်နှံရသည့် အချိန်ပိုင်းအပ်ငွေများ အပ်နှံပါက အတိုးနှုန်းကို ယခင်ပေးနေသည့်နှုန်းထားထက် ၁ ဒသမ ၅ ရာခိုင်နှုန်း ထပ်ဆောင်းပေးသွားမည်ဖြစ်ကြောင်း မြန်မာနိုင်ငံသားများဘဏ်မှ သိရသည်။
ထို့ပြင် ကျန်းမာရေးဝန်ထမ်းများ ဘဏ်ဝန်ဆောင်မှုအသုံးပြုမှုများအတွက် ဘဏ်ဝန်ဆောင်ခ ပေးဆောင်ရန် မလိုအပ်ကြောင်း မြန်မာနိုင်ငံသားများဘဏ်မှ ထုတ်ပြန်ထားသည်။
မြန်မာနိုင်ငံသားများဘဏ်သည့် ၁၉၉၂ တွင်စတင်တည်ထောင်ခဲ့ပြီး ရန်ကုန်စတော့အိတ်ချိန်းစာရင်းဝင် ဘဏ်တစ်ခုဖြစ်ပြီး မြို့ပေါင်း ၂၆ မြို့တွင် ဘဏ်ခွဲပေါင်း ၅၀ ဖွင့်လှစ်ထားသည်။
Myanmar Citizens Bank has decided to cut the interest rate on collateral loan by 0.5 percent further. The new loans applied until April will benefit the new interest rate cut and the bank will not charge the fine for belated payment and suspend the interest payment.
The bank charges7percent on loans funded by JICA and 11.5 percent on the loans it provides.
Moreover, it also offer 1.5 percent additional interest rate on the savings by health care workers who are working at either public hospital or private hospitals and waive the service charges for them upon using the bank’s banking services.
Myanmar Citizens Bank, established in 1992, is one of the listed companies at Yangon Stock Exchange, and has opened 50 branches in 26 cities.
Previous articleအထည်ချုပ်လုပ်သားများအတွက် ထောက်ပံ့ငွေ မေလ ၁ရက်နေ့တွင် စတင်ပေးအပ်
Next articleMyanmar suspends issuing visas until May15